Qeexid Shakhsiyeeye Gaar yeele Tix raace Qaybaha weedha Waydiiye Isku fale
3 Magac u yaalaDa
Qudhaalaha waxa la isticmaalaa, marka laga waramayo dad ama walax. Waa muhiim in ay weedhu yeelato fale, waayo falku isma badalo marka ay isticmaalayaan dad (eeg 1. Falal). Haddii aaney jirin erey-magaceed ama magac, waa inuu qofku xasuustaa in uu isticmaalo qudhaale.
Jeg kommer for sent. Anigu waan soo habsaamey.
Den er stor. Kani wuu wayn yahay.
Han lærer dansk. Isagu wuxu bartaa af dheenish.
De waxa la isticmalaa, marka qof wax sharfayo.Waxa had iyo jeer lagu qoraa D wayn, marka uu yahay qofka labaad oo keli ah. I wayn qofka labaad oo wadar ah.
Magac u yaal dadeed
anigu – waxan
anagu – waxaanu
adigu – waxad
idinku – waxaydun
isagu, iyadu, wuxu, waxay
iyaga – waxay
Af soomaaliga qudhaalaha lama hilmaami karo, walow ay falalku u higaadsami karaan hadba sida qofka wax qabanayaa isu badalo. Af soomaaliga laba erey ayaa u dhigma jeg, du (anigu - waxan, adigu - waxad, i.w.m.). Labada magac u yaalba waxa la isticmaalaa marka afka la qorayo. Odhaahda afka ee caadiga ah waxa la isticmaalaa oo kali ah waxan, waxad, i.w.m.
Anigu waxan imanayaa barito.
Waxan imanayaa barito.
Haddii ay tahay weedh-nuxureed waxa la isticmaalaa waxan, waxad, i.w.m. isagoo uu jiro silsillad-fale. Hadii ay tahay odhaah-caawiye taa looma baahnna.
Ninku waxa uu cabayaa kaafi, iyadoo xaaskuna sameynayso cunto.
Ninku waxa uu cabaa kaafi, xaaskuna waxa ay cabtaa shaah.